विपीका पूर्व भिसी डा. दासले साढे ७ करोड अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोप, विशेष अदालतमा मुद्धा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ विपीका पूर्व भिसी डा. दासले साढे ७ करोड अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोप, विशेष अदालतमा मुद्धा
विपीका पूर्व भिसी डा. दासले साढे ७ करोड अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोप, विशेष अदालतमा मुद्धा
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७७ भदौ ३० गते, १६:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं—विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्र (विपी) दासले ७ करोड ७१ लख ९२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दैं विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा. दासले अवैध सम्पत्ति कमाएको भन्दैं विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
विपी प्रतिष्ठानको विभिन्न पदमा हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको भनी परेको उजुरीमा छानविन गर्दा त्यति रकम बराबर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । २०५० सालमा जुनियर रजिष्ट्रारबाट सेवा सुरु गरेका डा. दासले २०६८ सालमा उपकुलपति र त्यसपश्चात प्राध्यापक पदमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
‘२०५० सालदेखि २०७६ सालसम्मको अवधिमा उनले त्यति रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको देखिन्छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ, ‘२०७६ असार ३० सम्मको उनको वैध आय ७ करोड ७० लाख १० हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ ८० पैसा देखिन्छ । तर, उनको १५ करोड ३२ लाख ३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।’
डा. दासले कमाएको भनिएको अवैद्य सम्पत्ति उनको श्रीमतीको नाममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरणमा राखेको हुँदा डा. दास र उनकी श्रीमती दुवैको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए ।
यस्तो छ अख्तियारको विज्ञप्ति